Kalsoonidda lugu qabo hey’addaha dowladda oo hoos u dhac weyn ku yimid | Somaliska
Hey’addaha u adeegga dowladda ee sida xafiiska shaqadda ee (Arbetsförmedlingen), laanta socdaalka ( Migrationsverket) iyo xafiiska ceymiska (Försäkringskassan) ayaa guud ahaan kalsoonidda lugu qabo waxaa ay muujisay mid aad u hooseeysa. Sidaana waxaa lugu ogaaday labbo ra’yi arruurin oo la sameeyey.
Kala bar hey’addaha u adeega dalka ee tiro koobankan laga qaatay, ayaa waxeey xafiisyadan muujiyeen kaloonidda shacabku ku qabeen halkii ugu hoseeysay. Sidoo kale hey’adda arruurisa tirro koobka ee la yiraahdo Sifo ayaa yidana shaacisay in xafiiska shaqadda uu ugu hooseeyo kalsoonidda lugu qabo xafiisyadda u adeegga bulshadda.
“Tan siyaasiinta ayaa loo aaneeynaya kalsoonidda xumadaas, xisbiyada mucaaradka ah ee la isku yiraahdo Alliansen (Xulufadda) ayaa iyagu tilmaamay in la baabi’iyo xafiiska shaqadda oo dhinaca kalena ku eedeynaya xisbiga Socialdemokraterna ee talada dalka haya in dhinacaas ka gaabiyeen.” ayuu yiri Toivo Sjörén,oo isgana madax u ah hey’addda ra’yi arruurintan geesteeda ka sameeysay ee Sifo, oo u waramayey wargeyska Svenska Dagbladet.
Ugu dambeyntiina hey’addaha kalsoonida buuxda lugu qabo ayaa kala ah SOS, hey’adda babaadada bulshadda iyo ciidanka ammaanka ee Säpo. Halka waaxda difaaca iyo goobaha lugu daryeelo danbiileyaasha ay iyaguna kalsoonida lugu qabo kor u kacday sida ay Sifo sheegtay.
Somaliska.com/wakaladda wararka TT